Par Taratra sur 21/06/2021
Vehivavy iray no hita faty tetsy Ambatoranja Ankadindratombo, omaly atoandro tokony ho tamin’ny 11 ora. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso sy ny polisy dia voaolana sy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka ity renim-pianakaviana ity. Tsikaritra fa notsetsenan’ireo olon-dratsy “couche”n-jaza ny vavan’io vehivavy io. Mpivarotra sesi-kidoro izy ary tsy fantatra ny toeram-ponenany, raha ny fanazavana voaray. Hita tsy lavitra azy ihany koa ny sesi-kidoro iray tanana tao ambaniny toy ireny natao lafika ireny, hoy ny loharanom-baovao iray. Nambarany fa nahitana voromailala fotsy ihany koa tsy lavitr’azy. Taorian’izay, naterina teny amin’ny tranom-patin’ny HJRA ny nofo mangatsikan’io renim-pianakaviana io. Handrasana ny tohin’ny fanadihadiana.
Efa mahatsiaro tena avokoa ireo olona miisa telo tra-doza tamin’ny lozam-pifamoivoizana tao Andakalaka, kaominina Andranolava, distrikan’i Marovoay, ny zoma lasa teo. “Efa tsy ahina ny fahasalamany saingy mbola tazonina ao amin’ny hopitaly Androva izy ireo”, hoy ny zandary. Tsiahivina fa olona miisa efatra maty tsy tra-drano nandritra ny loza nifandoman’ilay taksiborosy sy moto, olona 15 hafa koa naratra mafy.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Andraharo ny alin’ny asabotsy teo. Vehivavy iray voadonan’ny fiara karetsaka teny akaikin’ny Bassin. Nivadika tanteraka ny tongotr’ilay niharam-boina ka voatery nalefa vonjimaika teny amin’ny hopitaly. Ankoatra io, fiara taxi-be iray ihany koa nifandona tamina moto iray teny an-toerana, tsy nisy ny aina nafoy, saingy goavana ny fahasimbana teo amin’ny roa tonta.
Mpimasy iray 41 taona no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao Tolagnaro ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany tao Libanona. Voalaza fa mpiray tsikombakomba amin’ny dahalo amin’ny fanamboarana Mohara io lehilahy io, hoy ny fanazavan’ny polisy. Nohamafisny tamin’izany fa io voasambotra io no manome Mohara sy ody gasy an’ireo mpangalatr’omby sy mpanao fanafihana ao an-toerana. Hita tamin’ny fisavana ny tranony tamin’izany ny bokin’omby sy ody gasy maro samihafa. Loharanom-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo no nahafahana nisambotr’azy, hoy hatrany ny polisy.